Qaabka la yaabka leh ee lagu soo dooranayo ra’isul wasaaraha cusub ee Britain | Biyoguurenews.com
Home Wararka Qaabka la yaabka leh ee lagu soo dooranayo ra’isul wasaaraha cusub ee...
Qaabka la yaabka leh ee lagu soo dooranayo ra’isul wasaaraha cusub ee Britain
Tartanka loogu jiro xilka rai’sul wasaaraha Britain ayaa si lama filaan ah waji cusub u yeeshay-waxaana qaar badan oo ka mid musharaxiinta ay ka bixi la’yihiin in ay ka hadlaan markii ugu dambeeysay ee ay daroogo isticmaalaan.
Waxyaabihii ugu dambeeyay geedi socodkan la yaabka leh ee qayb yar oo ka mid ah bulshada ay ka qayb qaadanayaan, balse waa mid go’aan looga gaarayo mustaqbalka UK ee ka bixitaanka Yurub iyo xiriirka ay UK la yeelanayso Yurub mustaqbalka.
Markaan si kooban u eegno rai’sul wasaaraha imika xilka haysa ayaa intii ay xafiiska joogtay waxay la kulantay caqabado.
Markii ay Theresa May xilka kala wareegtay David Cameron (oo xilka ka dagay ka dib markii ay UK u codeysay ka bixitaanka Yurub ) waxay u muuqatay in dalka ay hogaamin doonto sanooyiin badan oo soo socda.
Fikirkii ahaa in xisbiga dhanka bidix ee Jeremy Corbyn ay ka baqi doonaan codbixiyayaasha ayaa dhab noqon wayday ,waxaana xisbiga shaqaalaha uu helay 30 kursi,halka xisbiga talada haya ee Conservativ-ka ay lumiyeen 13 kursi.
Dadka qirtay waxaa ka mid Rory Stewart oo imika ah wasiirka hormarinta caalamiga ah, Michael Gove wasiirka deegaanka iyo Jeremy Hunt xoghayaha arrimaha dibada waxayna dhammaantood sheegeen in ay mar daroogo isticmaaleen.
Musharaxa ugu cadcad oo la filayo in uu badalo Mrs May ,Boris Johnson, ayaa 2005 mar uu TV siinayay wareysi sheegay “in uu isku dayay in uu isticmaalo daroogada nooca Kookaynka (cocaine) “balse uu ku guuldareystay ka dib markii uu soo hindhisay islamarkana ay ka so daadatay.
Mrs May ayaa waxaa u suuragashay inay awoodda mar kale la wareegto iyada oo isku halaynaysa taageerada xisbiga yar ee (DUP) ee ka soo jeeda waqooyiga Ireland, balse taasi way shaqayn wayday.
Xisbiga DUP ayaa aad u necbaa heshiiskii ay Mrs May kula wadaxaajootay midowga Yurub ,waxaana sidoo kale arrintan ka soo horjeeday isla xisbigeeda muxaafidka.
Iyada oo taasi laga duulayo ayaa waxaa aqalka baarlamaanka ay saddex jeer diideen heshiiskii ay soo bandhigtay,waxaana xusid mudan in mar 432 cod lagu diiday heshiiska iyada oo ay taageereen 202, waxayna taasi ahayd jabkii ugu waynaa taariikhda ee soo gaara dowlad haysa talada UK.
Ka dib markii xisbigeeda uu doorasho ku lumiyay aqlabiyadii uu lahaa islamarkana ay ku guuuldareystay in ay heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub ay la gaarto midowga ayay ugu dambayntii Mrs May waxay iska casishay hogaamiyaha xisbigeeda 7 bishan June.
Arrintan ayaa keentay tartanka imika loogu jiro hoggaanka xisbiga iyada oo ra’sul wasaare cusub uu xilka qaban doono dabayaaqada bisha July ee soo socota.
Maxay tahay sababta qaar ka mid ah musharaxiinta ay ugu celcelinayaan in aysan daroogo isticmaalin?
Waxaa imika xilka ah in ay noqdaan hogaamiyaha UK u tartamaya 11 qof islamarkana 7 ka mid ah ayaa qirtay in ay horey u isticmaaleen daroogo sharci daro ah.
Arrintani ayaa ahayd mid aan caadi ahayn taasi oo ah in ay qirtaan shaqsiyaad doonaya in ay qabtaan talada wadanka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka islamarkana ah dal ku hubaysan hubka wax gumaada ee Niyukleerka.
Maxay tahay sababta 124,000 oo qof oo kali ah ay u codeynayaan?
Markii ay musharaxiinta ay dhameeyeen qirashadooda in horey ay darooga u isticmaaleen islamarkana ay suuragal tahay in nidaamyo la dajiyo ayaa waxaa bilaabanaysa codeyn lagu go’aaminayo cidda noqonaysa hogaamiyaha xisbiga Conservativ-ka islamarkana noqonaya ra’isul wasaaraha soo socda.
Geedi socodkani ma ahaa mid ay dadka dalka oo dhan ay go’aan ku leeyihiin.
Wareega ugu horeeya ,xubnaha baarlamaanka xisbiga ayaa codka dhiiban kara islamarkana musharaxa hela codadka ugu yar ayaa laga reebi doonaa wareegyada kale.
Marka labada musharax ee ugu dambeeya ay isku soo haraan ayaa dhammaan xubnaha xisbiga waxay dhiiban doonaan codkooda.,halkaasi oo lagu go’aansan doono cidda guulaysatay.
Balse dadka codka dhiibanaya tiradoodu waa 124,000 oo qof oo ka mid ah 47 milyan ee codbixiyayaasha guud ee dalka,taaso waa uun tira yar oo ah 0.26%.
Inkastoo ay cabashooyooyiin jiraan dalkaasi UK ,hadana waa qaabkaa nidaamka kali ah ee lagu soo doorto rai’sul wasaare cusub.
45tii sano ee ugu dambeeyay kala bar ka mid ah 8 hogaamiye ee soo maray UK ayaa waxaa so doortay xisbiyadooda siyaasadda ee laguma soo dooran doorasho guud.
Balse xubnaha xisbiyada siyaasada ma aha kuwa wada matala guud ahaan dalka Britain.
97% ka mid ah xubnaha xisbiga Conservativ-ka waa caddaan,taasi waxay micnaheedu tahay “…in qoomiyadaha laga tirada badan yahay oo dalka UK ka ah 10% aysan matalaad ku lahayn, sida uu sheegay Prof Tim Bale, oo ka tirsan jaamacadda Queen Mary ee London.
Marka rai’sul wasaaraha la dooranayo waxaan codad ku lahayn,da’yarta,dadka saboolka ah iyo kuwa laga tirada badan yahay .
Sideey arrintani u saamaynaysaa Ka bixitaanka UK ee Yurub?
Qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub ayaa ah arrinta ugu wayn ee siyaasadda UK waqti xaadirkan.
11 musharax ayaa wata qorshooyiin kala duwan oo arrintan ku saabsan.
11 musharax ayaa wata qorshooyiin kala duwan oo arrintan ku saabsan.Qofkii ku guuleystaba tartanka ayaa waxaa u taalla howl adag oo ah in uu dib u bilaabo wadaxaajoodka islamarkana uu UK kaga saaro Yurub waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay oo ku beegan 31 bisha October.
Previous articleDaawo,Raysal Wasaaraha dawlad xamar Dadka Bakhtiyaya gaajo wax ha Siiyo halka uu Kharash ku Bixinayo Xuska 26 juun oo Aanu Lahayn Isaga iyo Meeshuu Kasoo Jeedaaba, Aqoonyahan Qoraa Boobe Yuusuf Ducaale
Next articleJaaliyada Reer Somaliland Ee Dalka Ingiriiska Oo Bilaabay Olole ka Dhan ah Idaacada Afka Somaliga BBC,+Dacwad Ay Ka Gudbiyeen!